Myanmar Defence Weapons: ခေတ်မှီတပ်မတော်ကြီးဆီသို့....
Posted by MM at 10:18 PM
Cloud January 15, 2012 at 3:49 AM
နဲ့ ဘာတွေ ကွာလဲ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲ ရှင်း ပြ ပေး ပါ ခင်ဗျာ ။ မြန်မာ့ ရေတပ် မှာ တွေ သုံး နေလို့ပါ။
Cloud January 15, 2012 at 3:51 AM
C 801 နဲ့ C 802 ဘာတွေ ကွာလဲ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲ ရှင်း ပြ ပေး ပါ ခင်ဗျာ ။ မြန်မာ့ ရေတပ် မှာ C 801 တွေ သုံး နေလို့ပါ။
MM January 15, 2012 at 10:29 AM
ကိုCloudရေ ကျွှန်တော်တို့ဆီက စီ-၈၀၁တွေသုံးတာက စစ်ရေယာဉ်တွေဝယ်ယူတဲ့အပိုင်းနှင့် ဆိုင်မယ်ထင်တယ်ဗျ... ဟောင်ဇင်တွေကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာဝယ်ယူခဲ့တာပါ.. ဝယ်ကတည်းက စီ-၈၀၁ တွေ တပ်ပေးလိုက်တာပါ... စီ-၈၀၂ကတော့ အခုနောက်ပိုင်းထုတ်တွေမှာ အတော်သုံးလာပါပြီ စီ-၈၀၁၊၈၀၂ ဒုံးတွေရဲ့ ထိရောက်မှု (တာဝေးပစ်ခတ်မှု)ကလည်း အတော်ကွာသွားပါပြီ.. စီ-၈၀၁ က ၄၀ကီလိုမီတာ အထက်၊ စီ-၈၀၂က ၁၂၀ ကီလိုမီတာအထက် ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ မှတ်သားရပါတယ်။ စီ-၈၀၁ ဒုံးတပ်ယာဉ်တွေက ကမ်းရိုးတန်းစောင့်စစ်ရေယာဉ်တွေမှာ အဓိကအသုံးပြုမယ်ထင်ပါတယ်... အောင်ဇေယျဖရီးဂိတ်ကြီးမှာ အရင်က စီ-၈၀၂လို့ ယူဆခဲ့ပင်မဲ့ ကျွှန်တော်အနေနှင့် စီ-၈၀၂ ထက်ပိုအစွမ်းထက်တဲ့ ဒုံးစနစ်လို့ ယူဆပါတယ်...။ အမှားရှိရင် ထောက်ပြပေးကြပါဦးခင်ဗျာ...။
ko phone January 16, 2012 at 4:10 PM
I think we seriously need to update 85mm canon on PT-76 (type 63) thanks. It is no match for T59 or M60A3. However, in Vietnam war, North Vietnamese army managed to destroy US army M60 with PT-76 light tanks.